7 Kuzivikanwa kweFibromyalgia Trigger [Izvi Zvikonzero Zvinogona Kuverengera Kurwadziwa]
10 / 03 / 2019 /1 Comment/i fibromyalgia/av kundikuvadza
7 Anozivikanwa Fibromyalgia Trigger: Izvi Zvinogona Kugonesa Zviratidzo zvako uye Kurwadziwa
Fibromyalgia flares izita renguva apo kurwadziwa kwako kuchangoerekana kwanyanya. Idzi nguva dzakawedzera kazhinji dzinotangwa nevanonzi ude.
Pano iwe uchadzidza zvimwe zvinomwe zvinogoneka zvikonzero uye zvikonzero izvo zvinogona kutanga fibromyalgia flares uye wedzera zviratidzo zvako.
- Fibromyalgia chirwere chakaoma
Fibromyalgia inogona kuenda kure kupfuura hupenyu hwezuva nezuva uye hupenyu hwehupenyu - kunyangwe isina mazhenje. Asi kana chiitiko chakatsamwiswa chikatanga, izvi zviratidzo uye kurwadziwa zvinogona kupetwa kaviri nehusiku. Kwete chaizvo. Ndosaka zvakakosha kuti iwe udzidze zvakawanda nezve izvo zvinogona kukonzeresa - uye kwete zvirinani zvaungaite kuzvidzivirira. Isu tinorwira avo vane kumwe kurwara kusingaperi kwekurwadziwa uye zvirwere kuti vave nemikana iri nani yekurapwa uye kuongororwa - chimwe chinhu chisiri munhu wese anotenderana nacho, zvinosuwisa. Govera chinyorwa, sesu pane yedu FB peji og yedu YouTube chiteshi munhau dzezvemagariro kubatana nesu mukurwira hupenyu hwese hwepamoyo kune avo vanorwara nemaronda.
Ichi chinyorwa chinoenda kuburikidza nezvinomwe zvinokonzeresa zvinokonzeresa uye zvinokonzeresa kurwadziwa kwefibromyalgia uye zviratidzo zvako zvichiwedzera - vamwe vacho vangakushamisa. Pazasi chechinyorwa iwe unogona zvakare kuverenga zvakataurwa kubva kune vamwe vaverengi uye kuwana matipi akanaka.
1. Kushushikana Kwepfungwa uye Pamuviri
Zvichida chimwe chezvinhu zvisingashamisi zvinokonzeresa uye zvinokonzeresa kuwedzera zviratidzo zve fibromyalgia. Kushushikana kunouya nenzira dzakawanda uye zvimiro - zvese kubva kumatambudziko epfungwa, zvikamu zvepfungwa uye kushushikana kwemuviri. Isu tinoziva zvakare kuti ne fibromyalgia isu tine hypersensitive neropa system inobata zvakawedzera zvine simba kune kusagadzikana kwakadaro.
Kujairika kusagadzikana kunokonzeresa izvo zvinogona kukonzera fibromyalgia flare-up:
Matambudziko emanzwiro (kuzvishingisa, kuzvidya moyo uye kushungurudzika)
Kutama kunogara patsva
Tine zvimwe fibromyalgia tsinga ruzha (chimwe chezvakakonzera furu fibrotic) kupfuura vamwe. Izvi zvinoreva kuti isu tine magetsi emagetsi mumuviri wedu uye tinoshaya humwe maitiro ekudhira muuropi. Masayendisiti anotenda kuti nekunzwisisa zviri nani iyi hypersensitivity, munhu anogona kuwana mushonga. Yoga, kutambanudza uye kufamba kwekurovedza muviri inogona kuve nzira yakanaka yekubvisa kusagadzikana kwepfungwa uye kwemuviri - kunyanya usati warara. Mune chinyorwa pazasi iwe unogona kuona chirongwa chekudzidzisa chinokuratidza mashanu mashanu akanyarara maekisesaizi.
Dzvanya apa kuti uverenge zvimwe nezve aya maekisesaizi ekufamba - kana tarisa vhidhiyo pazasi (VIDEO).
Zano: Matanho ekuzorodza achipikisa Kuwedzera kunoenderana neStress
Zano rakanaka: -Shandisa Acupressure Mat yekuzorora
Vazhinji vevarwere vedu vanotibvunza nezve nzira dzavanogona kuwana kudzora zvirinani pamusoro pemarwadzo avo. Kune varwere vane fibromyalgia, isu tinowanzo kusimbisa matanho ekuzorodza - akadai sekushandiswa kwe acupressure bonde (tinya pano kuti uverenge zvakawanda nezvazvo - chinongedzo chinovhura muhwindo remuverengi mutsva). Isu tinokurudzira kushandiswa nguva dzose, uye zviri nani zuva nezuva kana iwe uchinzwa uchibatsirwa nazvo. Sezvo iwe uchijaira kushandisa mat, unogona zvakare kuwedzera nguva yenguva yaunorara pairi.
Zvimwe Zviyero Zvinokurudzirwa Zvekurwara uye Rheumatic Pain
Arnica kirimu kana kupisa conditioner (vamwe vanofunga kuti izvi zvinogona kuderedza mamwe emarwadzo)
2. Kurara Kwakashata
Isu ne fibromyalgia tinowanzo tambura nekutadza kurara uye kuderedzwa kwekurara kunaka. Pakati pezvimwe zvinhu, izvi zvinoreva kuti tinowanzomuka uye tinonzwa taneta mumuviri mangwanani. Fibromyalgia inodzivirira kurara kwakanyanya uye inotichengeta tiri nyore kurara (kana tasvika pakurara zvachose).
Dambudziko neizvi ndere kuti kurara ndiyo nzira yemuviri yekugadzirisa uye kuwana kunetseka kwepfungwa uye kwepamoyo. Patinorara, huropi hunosuka ndiro uye hunosuka zvese zvatakasangana nazvo uye nemanzwiro. Kusava nehunhu hwekurara kunoenda kupfuura kuita uku - uko kunogona kukonzera kuwedzera kurwadziwa kwe fibromyalgia.
Verenga zvakare: Fibromyalgia uye Kurwadziwa Mumangwanani: Iwe Unorwara Kubva Kurara Zvakashata?
Pano iwe unogona kuverenga zvimwe pamusoro pemashanu mashanu ezviratidzo zvemangwanani mune izvo zvine fibromyalgia.
3. Shanduko Yemamiriro ekunze uye Tembiricha Sensitivity
Iko hakuna kunyepedzera kuti rheumatologists vanoona kuwedzera zviratidzo kana mamiriro ekunze achichinja - ichokwadi chinotsigirwa mukutsvaga.(1). Kunyanya, iyo barometric kudzvinyirira (kumanikidzwa kwemhepo) kwaive kuita danho kana zvichikonzera kutowedzera zviratidzo. Vazhinji vanopindurawo zvakanyanya zviri nani kune zuva uye kudziya kwemamiriro ekunze.
Mamiriro ekunze akagadzikana saka ari nani kwatiri neakapfava tisu rheumatism (fibromyalgia). Asi muNorway yedu inodikanwa, inyaya yekuti isu tine yakajeka mwaka yemamiriro ekunze uye nekudaro zvakare makuru ekuchinja kwemamiriro ekunze dzimwe nguva - izvo zvinogona kuve nemhedzisiro yakaipa muchimiro chezvimwe zviratidzo uye kurwadziwa kwefibromyalgia.
Iyo inowanzo kutaurwa kunyanya nezvekushomeka mumutsipa nemapfudzi e rheumatics mune yakadaro mamiriro ekunze. Izvo, pakati pezvimwe zvinhu, zvinotungamira kune izvo zvatinodaidza Kusimbisa mutsipa. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve ino fungidziro mune yevaenzi chinyorwa kubva Råholt Chiropractor Center uye Physiotherapy mune chinyorwa pazasi.
4. Kuita Zvakawanda Pamazuva Akanaka
Isu tinoziva kuti zviri sei, asi zvakadaro isu tinowanzo kuwira mumusungo mumwe chete - ndiko kuti tibase pfuti yakawandisa patinonzwa zviri nani zvishoma. Chero munhu anorwara nemusoro anorwara anogona kuona kuti INOPONESESWA KUNOGADZIRA apo kurwadziwa kwacho kuchangoerekana kwaserera zvishoma. Asi chii chatinoita ipapo? Kupisa wakawandisa poda!
Kuchengetwa kwemba, kutumwa kana kuungana - tinoneta kurega hana yakaipa ichitora nzvimbo. "Ini ndinongofanirwa kuti ndichenese imba izvozvi" kana "Gunda naFride vangade kusangana neni kucafe nhasi" - saka tinozvikanda imomo. Dambudziko rega nderekuti simba remagetsi rinowanzo gadziridzwa kwechinguva - uye BANG tobva taenda kubang.
Imwe nzira yekuwedzera masimba esimba iyi inogona kunge iri nekudya zvakanyatsonaka uye zvakagadzirirwa kuzviongorora kwako. Iyo 'fibromyalgia dhayeti' inotevera yenyika dhayeti kuraira uye nhungamiro. Unogona kuverenga zvakawanda nezvazvo muchinyorwa chiri pasi apa.
5. Kuenda kumwedzi uye Hormonal Shanduko
Hormonal shanduko zvakare inowanzobatanidzwa zvine simba nekuwedzera kwekurwadziwa kwe fibromyalgia uye zviratidzo. Imwe haina chokwadi chekuti nei iri rekuwedzera rakaipa kune avo vane zvinyoro nyoro rheumatism - asi inosanganisirwa ne hypersensitivity muhurongwa hwemitsipa yemuviri.
Mumwe anogona zvakare kuona kuwedzera nekuchinja kwehomoni - sekuonekwa ne:
Zvimwe zvidzidzo zvekutsvaga zvakacherechedzawo kuti ne fibromyalgia isu tinowanzove nemazinga akaderera emahomoni dopamine uye serotonin. Nekudaro, munhu anogona kuona kuti mahormone anoita basa risingazivikanwe mune rakapfava rheumatism kusvika nhasi, iyo inofanirwa kuongororwa zvakare.
Kuziva masikirwo ekudzivirira-kurwisa matanho anogona kunyatsobatsira rheumatics. Pazasi iwe unogona kuverenga zvimwe nezve zvisere zvakasikwa zvekudzivirira maitiro.
6. Chirwere uye Fibromyalgia
Chirwere, chakadai sechikosoro uye furuwenza, zvinogona kuita kuti kurwadziwa kwako kwe fibromyalgia kuwedzere. Izvi zvinodaro nekuti mune zvinyoro zvinyoro rheumatologists, muviri nehuropi zvinogara zvichishanda kudzora nekudzora masaini ekurwadziwa - uye kuti mamwe mabasa, akadai sehutachiona hutachiona, anogona kutungamira mukuwandisa.
Kana tave nechimwe chirwere mumuviri - kuwedzera kune yakapfava tishu rheumatism - ipapo muviri unofanirwa kupa mabasa awo. Nekuda kweizvozvo, pane mashoma mashoma ekubatsira kuchengetedza fibromyalgia muchidimbu mukutarisa, uye kamwe kamwe tinoziva kuti zviratidzo uye kurwadziwa vari kuzivisa kwavo (kuwedzera) kuuya.
Isu isu vane fibromyalgia tinoziva kwazvo neyakajairika furuu mitezo yemuviri, majoini uye zvinyoro nyoro - mushure mezvose, isu tinorarama nayo zuva rega rega. Asi zvakange zvakadaro neizvi zvekuti nyika dzinoverengeka dzinogona kuputira pamusoro peumwe neumwe nekusimbisa mumwe neumwe. Ndiwo maitiro ekunyorovesa-matangi rheumatists anowana iwo furu.
7. Kukuvadzwa, Trauma uye Mashandiro
Fibromyalgia inokonzera hypersensitivity mune zvinyoro zvinyoro uye hurongwa hwetsinga. Kunyanya nekuda kweizvi, kukuvara kwekunze (kuwedzeredza, kumonyorora kwebvi) kana kuvhiyiwa (somuenzaniso, arthroscopy yemapfudzi kana hip prosthesis) inogona kutungamirira kukuwedzera kwezviratidzo zvako. Iwe unogona kuienzanisa neye-over-reaction kubva mumuviri wako inoshungurudza marwadzo.
Hypersensitivity nekudaro inoguma nekushomeka kwekutonga kwechiratidzo masaini uye manzwiro ekufunga muuropi. Nekudaro, kupindira kwakakura, sekushanda kwechiuno, kunogona kukonzeresa kuti masaini ekurwadziwa apfure mudenga nekuda kwekukuvara kwematumbu kunoitwa pakuvhiya kwakadaro.
Izvi zvinoreva kuti mukuwedzera kupora mushure mekuvhiya zvinorema, isu tinofungawo kuti izvi zvinogona kukonzeresa kushungurudzika kwemarwadzo edu e fibromyalgia. Hazvina kunaka! Kurapa kwemuviri uye kudzidziswa chaiko kunokosha mukuderedza mukana wekurwiswa kwemarwadzo akadaro mushure mekuvhiyiwa.
Tinovimba nemoyo wese kuti chinyorwa ichi chinogona kukubatsira mukurwisa kurwadziwa kusingaperi. Kana ichi chiri chimwe chinhu chauri kudawo nacho, saka tinovimba kuti unosarudza kujoinha mhuri yedu pasocial media uye kugovera chinyorwa zvakare.
Zvekare, tinoda kudaro bvunza zvakanakira kugovera chinyorwa ichi munhau dzezvemagariro kana kuburikidza ne blog yako(ndokumbira kubatanidza zvakananga kuchinyorwa). Kunzwisisa, ruzivo rwevose uye kuwedzera kutarisisa ndiwo matanho ekutanga kune hupenyu hwezuva nezuva hwevaya vane chirwere chisingaperi chekurwadziwa.
Bata izvi kuti ugovane zvimwe. Kutenda kukuru kune wese munhu anobatsira kukurudzira kuwedzera kwekunzwisisa kwe fibromyalgia.
Isu tinopa kuongororwa kwemazuva ano, kurapwa uye kudzidziswa kwekugadzirisa marwadzo asingagumi.
(Isu tinoedza kupindura kune ese mameseji uye mibvunzo mukati megumi nemana maawa makumi mana nemasere)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/FIBROMYALGITRIGGERE.jpg?media=1648573622 368 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2019-03-10 12:52:402022-03-18 16:06:447 Anozivikanwa Fibromyalgia Trigger
Ndinochengeta sei chinyorwa ichi kuti ndigone kuchidhinda ndokuchiisa muvhevhheni yangu, ndinokanganwa nekukurumidza uye pepa kopi yeruzivo rwakakosha runondibatsira zvikuru.
Fibromyalgia Flare-ups uye Trigger 7 Kurapa kwechisikirwo kwePsymaasis Arthritis